ईनरीच हेअर एन्ड बुतिका क्लिनिकस » Khulla Sanchar
ईनरीच हेअर एन्ड बुतिका क्लिनिकस
ईनरीच कहिले स्थापना भएको हो ?
२००६ साल बाट स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो ।
यस पेशामा लाग्न प्रेरणा अथवा हौसला कस्को रहेको छ ?
प्राय जसो फिल्डहरु आफैमा निर्भर हुन्छ । म एउटा फेसन डिजाइनर पनि हो र यो पेशामा लाग्न मलाई कसैको प्रेरणा छैन भन्दा पनि हुन्छ किनकी यो पेशा यस्तो पेशा हो जस्मा अरुको हात, खुट्टा अनुहार सुम्सुम्याउनु पर्छ र कसैले पनि यो पेशामा लाग्न हौसला दिनुहुन्न । यसमा मेरो आफ्नै विचार चाहाना र मेरो ग्राहकको प्रेरणा रहेको छ ।
ईनरीचमा के कस्ता सेवाहरु प्रदान गर्दै आउनुभएको छ ?
ईनरिचमा पाईने सर्भिसहरु भनेको जति पनि अरु पार्लरमा पाईने सर्भिसहरु नै हो । यसको मुख्य सर्भिस भनेको फेसियल हो । मैले बाहिर गएर फेसियलमा पनि स्किनको कोर्ष गरेको हुनाले बिशेषचाहि स्किन केयर नै हो । जो कस्टमर एकदमै हतोत्साहित भएर अब मेरो अन्तिम ईनरीच नै हो भनेर विस्वास लिएर आउनू हुन्छ म आउने कस्टमर लाई निराश पार्दिन ।
ईनरीचलाई ग्राहकले मन पराउनु को कारण के छ ?
मेरो ग्राहक भनेको १० बर्ष अगाडी बाट म सँंग इनभल्ब हुनु भएका पुराना ग्राहकहरु नै हुनुहुन्छ । उहाँहरु १० बर्ष देखि महिनामा एकपल्ट ईनरीच हेअर एन्ड बुतिका क्लिनिकस सर्भिसका लागि आउनुहुन्छ । मेरो त्यस्तो रिलेशन छ, त्यस्को लागि सबभन्दा पहिलो कुरा त सर्भिस मा प्रफेक्ट हुनपर्छ म मात्रै राम्रो भएर पुग्दैन मेरो क्लाईन्डले हेर्ने भनेको मेरो सेवामा कवालिटि हो र मेरो व्यावहार । सर्भिसमा मेरो ९९ प्रतिशत छ र मेरो विहेविअर पनि राम्रो छ भने १ प्रतिशत ग्रहकले कम्प्रमाइज गर्छन् तर मेरो बिहेबिअर नै राम्रो छैन भने कस्टमरले कम्प्रमाइज गदैनन् । जो यहाँ आउनूहुन्छ नी उहाँ हरुलाई यो फिल हुदैनकि म एउटा सैलुनमा जादैछु किनकी उहाँहरु एउटा फेमिलीमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ । ईनरिच एउटा हाईजिन, सफा, फ्रायाङ्की र मेन्टेन भएका कारण ग्राहकले मन पराउँछन् ।